Andro manohitra fitsapana niokleary - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Andro manohitra fitsapana niokleary
22 / 08 / 2019 22 / 08 / 2019 ny Antonio Gancedo
Aogositra 29, andro iraisam-pirenena hiatrika fitsapana niokleary, andro hanairana ny momba ny fiantraikan'ny fitsapana nokleary
Ny 29 ny volana aogositra dia nambaran'ny ONU ho andro iraisam-pirenena hiatrika fitsapana nokleary.
Andro iray hanentanana ny saina mikasika ny fiantraikan'ny voka-dratsin'ny fitaovam-piadiana niokleary na ny fipoahana nokleary hafa.
Ary ampitao ny filàna hanafoana ny fitsapana nokleary ho iray amin'ny fomba hahatratrarana a izao tontolo izao manana fitaovam-piadiana niokleary.
Nekena tamin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta Kazakhstan sy ny daty nofinidy io, io, ho fahatsiarovana ny andro nanakatonana ny toeram-panadinana niokleary Semipalátinsk, tao Kazakhstan ao 1991.
Tamin'ny volana Desambra 2 ny 2009 dia nankatoavin'ny Fihaonambe fa nahazo izany Fanapahan-kevitra 64 / 35 izay ny 29 ny volana Aogositra dia nambara ho Andro iraisam-pirenena manohitra ny fitsapana niokleary.
Ny fankalazana voalohany androany dia nankalazaina tao amin'ny 2010
Nanomboka teo dia nisy fifanarahana niarahan'ny Comprehensive nuklear testarin nuklear (CTBT) ary nisy Orinasa iray natsangana mba hampiharana azy, saingy ny fifanarahana dia tsy mbola misy ny fanohanan'ny rehetra ary tsy mbola nampiharina.
Ny parliamento, ny governemanta ary ny fiarahamonim-pirenena dia ampirisihina hankalazaina ny Andro iraisam-pirenena manohitra ny Fitsapana niokleary amin'ny alàlan'ny fanambarana sy ny hetsika izay manentana ny Fifanarahana Fanadihadiana Nukleary feno, ary koa ny fandrarana ny fampiasana fitaovam-piadiana niokleary sy ny zava-bita. an'izao tontolo izao tsy misy fitaovam-piadiana niokleary.
Ny Projet ATOM dia mangataka fotoana fohy misy fahanginana
Karipbek Kuyukov, lasibatr'ireo fitsapana niokleary sovietika faharoa sy ambasadaoro an'ny Tetikasa ATOM, miantso ny olona manerana an'izao tontolo izao mba hijery ny fotoana mangina amin'ny 29 Aogositra.
"Ny fitsapana fitaovam-piadiana niokleary any Kazakhstan sy eran'izao tontolo izao dia nampijaly ny maro," hoy i Kuyukov.
“Mitohy ankehitriny ny fijalian'ireo niharan-doza ireo. Tsy hadino ny tolona ataonao. Mamporisika ahy aho, ho fahatsiarovana ireo nijaly sy hanohizan'izany, amin'ny olona manerana an'izao tontolo izao mba hijery ny fotoana mangina amin'io andro io. ”
Tian'i Kuyukov hitandrina ny fotoana fahanginan'ny 11: 05 am, fotoana ao an-toerana.
Amin'ity vanim-potoana ity, ny tànan'ny famantaranandro analog dia manoratra litera romanina "V", izay maneho ny fandresena.
"Ny fotoana mangina sy ny fanehoana ny fandresena dia manome voninahitra ireo izay nijaly sy namporisika ny vondrona iraisam-pirenena hanohy ny fandresena amin'ny fandrahonana fitaovam-piadiana niokleary."
Tetikasa 'Raikitra ny rivotra', arahin'ny colloquium
2pm. 23 Aogositra 2019
Chambre Public an'ny Federasiona Rosiana, Moskoa, Rosia Raha ny Wind Blew dia antontan-taratasy mahavariana momba ny fiantraikan'ny fitsapana nokleary sy fiaraha-miasa eo amin'ny hetsika anti-nokleary ao Kazakhstan sy Etazonia (ny hetsika Nevada-Semipalátinsk) izay nahomby tamin'ny famaranana Semipalátinsk toerana fitsapana nokleary ary manome lalana ny The CTBT.
Ny screening dia mankalaza ny Andro iraisam-pirenena manohitra ny fitsapana niokleary sy ny tsingerintaona 30 tamin'ny nananganana ny hetsika Nevada-Semipalátinsk.
Amin'ny teny Rosiana ny hetsika. Raha hisoratra anarana: Alzhan Tursunkulov amin'ny telefaona 8 (495) 627 18 34, WhatsApp: 8 (926) 800 6477, mailaka: a.tursunkulov@mfa.kz
Kaonferansa momba ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny faritra tsy misy fitaovam-piadiana nokleary (ZLAN)
Aogositra 28-29, Nur-Sultan, Kazakhstan
Ny fihaonambe dia amin'ny alàlan'ny fanasana fotsiny, fa hamoaka antontan-taratasy valiny ho an'ny fizaran-tany midadasika.
ONU, Genève: Ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny ZLAN
Alatsinainy septambra 2. 13: 15 - 15: 00 hariva tany Genève, Lapan'ny firenena, efitrano XXVII
RY Zhanar Aitzhanova. Solontena maharitra an'ny Kazakhstan ho an'ny Firenena Mikambana ao Genève
Ramatoa Tatiana Valovaya, Tale jeneraly, Birao iraisampirenena any Genève
Andriamatoa Alyn Ware; Mpandrindra eraky ny PNND, mpanolo-tsaina ny fikambanana iraisam-pirenena mpisolovava manohitra ny fitaovam-piadiana niokleary
Atoa Pavel Podvig. Mpanadihady voalohany, fitaovam-piadiana mamotika ary fandaharana fitaovam-piadiana stratejika hafa, Ivontoerana avy amin'ny Firenena Mikambana misahana ny fikarohana fikarohana.
Haga clic aquí mahita ny flyer ny hetsika.
Ireo izay tsy manana ONU dia liana amin'ny hetsika: mifandraisa: a.fazylova@kazakhstan-geneva.ch alohan'ny volana Aogositra 28.
UN, New York: fivoriana plenary avo lenta
Alakamisy 9 tamin'ny volana septambra ny 2019. Fotoana: 10: 00 am
Efitrano Fivoriambe lehibe, foiben'ny Firenena Mikambana
Fanamarihana fanokafana: HE María Fernanda Espinosa, Filohan'ny Fihaonambe
Izay tsy manana UN Pass izay liana amin'ity hetsika ity dia tokony hifandray: Ramatoa Diane Barnes ao amin'ny + 1212963 9169, mailaka: diane.barnes@un.org
Tsaroana eto Italia, Hiroshima sy Nagasaki